Dr. Tint Swe's Writings: Stroke Emergency Treatment ဆထုပ် အရေးပေါ်ကုသခြင်း
ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်၍ လေဖြတ်သည့်လူနာများအား နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်ကင်းသက်သာစေမည့် ထိုးဆေးဖြင့် ကုသပေးခြင်းကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင်စတင်နေပြီဆိုတာ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတွေ့ပါတယ်။ အသေအချာသိစေရအောင် ဒီစာကိုရေးပါတယ်။
ထိုးဆေးဆိုတာ Tissue Plasminogen Activator (TPA) ဖြစ်ပါတယ်။ You Tube မှာလည်းကြည့်နိုင်တယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=fW8tPrqaeNU
ဦးနှောက်ကို ရုတ်ရက် သွေး (အောက်စီဂျင်) မဝဖြစ်တာကို (ဆထုပ်) လို့ခေါ်တယ်။ လေဖြတ်တာဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရေးပေါ်ကုသမှုလိုတယ်။ ဦးနှောက်မှာ အဲလို မတော်တဆဖြစ်မှုမှာ ၂ မျိုးရှိတယ်။ Ischemic stroke သွေးကြောပိတ်တာနဲ့ Hemorrhagic stroke သွေးယိုထွက်တာ။ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေက သွေးမရတာနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သေသွားမယ်။ Ischemic stroke ဖြစ်တာကပိုများတယ်။
(ဆထုပ်) ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင် -
ကိုယ်တဖက်ခြမ်းမှာ မျက်နှာ၊ လက်၊ ခြေတွေထုံလာမယ်။ မျက်စိ (တဖက်-နှစ်ဖက်) အမြင်ဝေဝါးလာမယ်။ စကားပြော ဝါးလာမယ်။ ခေါင်းမူးမယ်။ ကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီအောင် မထိန်းနိုင်ဖြစ်လာမယ်။ လဲကျမယ်။ မျိုချရတာခက်လာမယ်။ ခေါင်းအတင်းကိုက်မယ်။ စိတ်ရှုတ်ထွေးမယ်။
အရေးပေါ်ကုသခန်းပို့ရမယ်။ CT scan နဲ့ EKG ရိုက်စစ်မယ်။ (IV) line သွေးပြန်ကြောထဲပိုက်သွင်းထားပေးမယ်။ အောက်စီဂျင်ပေးမယ်။ အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုလုပ်မယ်။
Ischemic stroke ဖြစ်ရင် ဦးနှောက်ထဲကသွေးလွှတ်ကြောလေးတခုထဲမှာ သွေးခဲလေးပိတ်နေတယ်။ သွေးဆက်မသွားနိုင်ဘူး။ သွေးမယိုဘူး။ Clot busters ခေါ်သွေးခဲပျော်ဆေးအရေးပေါ်ပေးမယ်။ ဖြစ်ပြီး ၃ နာရီအတွင်း ပေးရတယ်။ T-PA (Activase) ဆေးကို အများဆုံးသုံးတယ်။ Tissue plasminogen activator ဖြစ်တယ်။ သွေးယိုမယ့်အန္တရာယ်ကို သတိထားရမယ်။ ဆေးကို သွေးပြန်ကြောထဲ တနာရီကြာသွင်းပေးမယ်။
Intra-arterial t-PA ဆေးကတော့ ထိခိုက်မှုနေရာကို တိုက်ရိုက်ပေးနည်းဖြစ်တယ်။ ပေါင်ခြံကနေ သွေးလွှတ်ကြောထဲကို (ကသီတာ) ပိုက်ကလေးသွင်းပြီး ဦးနှောက်ထဲက ဖြစ်တဲ့နေရာအထိရောက်စေမယ်။ ဆေးသွင်းပေးမယ်။ ဆေးအလေးချိန် နည်းနည်းသာလိုမယ်။ သွေးလွှတ်ကြောထဲထိုးရတာဖြစ်တယ်။ Intra-arterial t-PA လိုခေါ်တယ်။ Arteriogram သုံးပြီး ထိုးရတယ်။ ၃ နာရီကြာမယ်။
Mechanical clot removal (ကသီတာ) လေးနဲ့ သွေးခဲဖယ်နည်းလည်းလုပ်နိုင်တယ်။ သွေးခဲကို ချေမွနည်းနည်း ဖယ်ရှားနည်းရှိတယ်။ သွေးလွှတ်ကြေသုံးပြီး ဆေးထိုးနည်းနဲ့ သွေးခဲရှင်းနည်းကို အကျိုးများမှုအတွက် လေ့လာနေတယ်။
Aspirin အက်စပရင်ဆေးလည်းပေးမယ်။ ကာကွယ်ဆေးဖြစ်တယ်။
ကျဉ်းနေတဲ့သွေးလွှတ်ကြောမှာစုဝေးနေတဲ့ fatty deposits (plaques) အဆီလွှာကို ဖယ်ရှားနည်းလည်း လုပ်ရတာ ရှိတယ်။
Carotid endarterectomy ဦးနှောက်သွား (ကရောတစ်) သွေးလွှတ်ကြောခွဲစိတ်နည်းခေါ်တယ်။
Angioplasty and stents ပေါင်ခြံနေရာကသွေးလွှတ်ကြောကနေတဆင့် ဦးနှောက်သွား (ကရောတစ်) သွေးလွှတ်ကြောထိ ရောက်အောင်သွားပြီး ဘူလုံးလေးသုံးပြီး သွေးစီးလျှောက်လမ်းကို ကျယ်စေမယ်။ ပြီးရင် Stent တခုထည့်ပေးပြီး သွေးသွားလမ်းပွင့်နေစေမယ်။
Hemorrhagic stroke သွေးယိုတဲ့ (ဆထုပ်) ရောဂါ
အရေးပေါ်အဖြစ် Warfarin (Coumadin) ဆေး၊ Anti-platelet drugs ခေါ် Clopidogrel (Plavix) ဆေးပေးမယ်။ သွေးပြစ်အောင် သွေးထဲကသွေးမှုံသပ်သပ်သွင်းပေးမယ်။ ဦးနှောက်ဖိအားကျတေးနဲ့ သွေးတိုးကျဆေးတွေပေးမယ်။
သွေးဆက်မထွက်တော့ရင် ယိုထားတဲ့သွေးတွေကို စုပ်ယူနိုင်အောင်ဆက်လုပ်ရတယ်။ လိုအပ်ရင် သွေးခဲကို ခွဲထုတ်ရတယ်။
Surgical blood vessel repair သွေးကြောခွဲစိတ်နည်းလည်းလိုရင် လုပ်ပေးရတယ်။ Aneurysm ဖြစ်နေတာနဲ့ Arteriovenous malformation (AVM) ဖြစ်တာတွေအပြင် မူမမှန်ဟုတ်ရင်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးရတယ်။ Surgical clipping ညှပ်သုံးနည်း၊ Coiling (endovascular embolization) အခွေသုံးနည်းနဲ့ Surgical AVM removal ဖယ်ရှားနည်း ရွေးရတယ်။
Intracranial bypass (ဘိုင်ပတ်စ်) နည်းလည်းလိုတဲ့လူနာကိုလုပ်တယ်။
Stereotactic radiosurgery ရေဒီယိုလှိုင်းသုံးနည်းလည်းလုပ်ပါသေးတယ်။
Acute Myocardial Infarction နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းဖြစ်ရင် မြန်လေကောင်းလေဖြစ်တယ်။
T-PA (Activase) ထိုးဆေး Accelerated infusion (1-1/2 hr)
≤67 kg: 15 mg IVP bolus over 1-2 minutes, THEN 0.75 mg/kg IV infusion over 30 minutes (not to exceed 50 mg), and THEN 0.5 mg/kg IV over next 60 minutes (not to exceed 35 mg over 1 hr)
>67 kg (100 mg total dose infused over 1.5 hr): 15 mg IVP bolus over 1-2 minutes, THEN 50 mg IV infusion over next 30 minutes, and THEN remaining 35 mg over next 60 minutes
<65 kg: 0.075 mg/kg IVP bolus over 1-2 minutes, THEN 0.675 mg/kg infused over the rest of the first hr, THEN 0.25 mg/kg IV for the next2hr
≥65 kg: (100 mg total dose infused over3hr): 6-10 mg IVP bolus over 1-2 minutes, THEN 50-54 mg infused over the rest of the first hr (ie, 60 mg in 1st hr including 6-10 mg bolus), THEN 20 mg/hr for the next2hr
မြန်မာပြည်သားတွေ ဦးနှောက်-သွေးကြောရောဂါဘေးက ဝေးကြပါစေ။
1. Ischemic Heart Disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/ischemic-heart-disease.html
2. Stroke Emergency Treatment ဆထုပ် အရေးပေါ်ကုသခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/stroke-emergency-treatment.html
3. Stroke ဦးနှောက်သွေးကြော ဖောင်းပြီးပေါက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/stroke.html
4. Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောမတော်တဆဖြစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/stroke_22.html
5. Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/stroke.html
6. Stroke လေဖြတ်ရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/stroke.html
မြန်မာပြည်သားတွေ ဘယ်မှာနေနေ ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါဘေးက ဝေးကြပါစေ။
ASCUS Pap abnormality သားအိမ်ဝစစ်ချက် ပုံမှန်မထွက်...
Medical vocabulary ဆေးစာ ဝေါဟာရများ (အင်္ဂလိပ်-မြန်မ...
Post of2years ago about the event of 11 years ag...
Burma–Thailand relations မြန်မာ-ထိုင်းဆက်ဆံရေးသမို...